Bur-Burka fidiya ee ka muuqada wadada isku xirta magaalada Boosaso iyo Puntland inteeda kale
Bur Burka iyo dayactir la'aanta ka muuqata jidka
Wadada oo ka soo dhamaaneysa dhinayacyada hadaan la buuxin iyadoo khatar ugu jirta daadka roobka inuu qaado
Bur Bur baahsan oo ka muuqda inta badan wadada kaasoo helin gacan ku hayata hay'ada PHA
GAROWE, Puntland - Wadada isku xirta magaalooyinka Garoowe iyo Boosaaso oo ah halbowlaha dhaqaale ee maamulka Puntland ayaa waxaa lasoo gudboonaadey bur-bur baaxad leh kadib markii hay’adda wadooyinka ‘PHA’ gabi ahaanba gabtey Afartii sano ee lasoo dhaafey dayactirkii lagu sameyn jirey wadadaasi.
Wadadan oo ay maraan inta badan gadiidka xamuulka ee isaga kala goosha degaanada Puntland, Gobolada dhexe ee Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa waxaa lagu dhisey mashruuc dowladda Talyaaniga ku deeqdey xiligii dowladii AHN Maxamad Siyaad Barre talada dalka haysay.
Hay’ada Wadooyinka ‘PHA’ oo markii hore la oran jirey NESHA ayaa waxa la aas-aasey xiligi Madaxweynaha uu Puntland ka ahaa AHN Cabdullaahi Yuusuf taasoo ujeedkeedu ahaa in ay dayactirto Jidadka Hal-bowlaha u ah dhaqaalaha degaanada hoos yimaada maamulkan kuwasoo ay ugu horeeyaan wadooyinka isku xira Garoowe/Galkacayo iyo Garowe/Boosaaso.
PHA ayaa dakhliga loogu talagaley iney ku qabato howshan waxaa loo asteeyey inuu ka yimaado caahuurta ‘Levy’ laga qaado dhamaan qalabka Gadiidka ‘Spare Parts’ iyo dhamaan Gadiidka nooc kasta uu yahay ee kasoo daga dekeda magalaada Boosaaso.
Cashuurta saaran qalabka ayaa ah; taayarada, Olyada, Bateriga, qalabka kale ee lagu hagaajiyo gadiidka iyo Gadiidka kala duwan taasoo ku dhacda xisaabta ay ku leeyihiin Wasaarada Maaliyada.
“Afartii sano ee la soo dhaafey hay’adda Wadooyinka ma qaban shaqadii dayactirka wadooyinkan gaar ahaan wadada isku xirta Boosaaso iyo Gobolada kale ee Puntland taasoo halbowle u ah kaabayaasha dhaqaale ee dalka," sidaas waxaa Warsidaha Garowe Online u sheegey mid kamid shaqaalaha Hay’adda oo diidey in magaciisa aan sheegno.
Maxaa Howlgab ka dhigay ‘PHA’?
Warsidaha GO ayaa ogaadey sababta keentey howlgabka ku yimid ‘PHA’ inuu yahay labo arimood; dakhligii hay’adan ku qaban jirtey shaqada dayactirka oo Xafiiska Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali "Gaas" u weeciyey meelo kale iyo siyaasada xukuumada xilka hadda haysa oo ay ka maqan tahay ku taxa-luqida iyo dayactirka kaabayashii dhaqaale ee horey u jirey iyadoo raadineysa dacaayad ‘Publicity’ ay ku hesho iney soo kordhisay wax cusub.
Hay’adan oo kamid aheyd hay’adaha dakhli ahaan ka madax banaan miisaaniyada Dowladda ayaa sida aan wararka ku heleyno waxaa iminka lasoo gudboonaadey dhaqaale xumo ba’an iyadoo shaqaalaheedu mushahar qaadan muddo Afar bilood ah.
”Iska daa Wadooyin aan dayactirno, mushaharkii shaqaalaha ayaa maqan muddo afar bilood ah.” sidaas waxaa u sheegey GO qof ka tirsan shaqalaha hay’adda.
Madaxweynaha Dowlada Puntland ayaa October 7, 2017 agaasime ugu magacaabey hay’adda wadooyinka ‘Cabdirizaq Yusuf Cilmi’ kasoo badaley Maxamud Cabdinuur oo aan waxba ka qaban burburka baahsan ee ka muuqda wadada isku xirta Boosaaso iyo Gobolada kale ee Puntland inta uu xilka hayey.
Agasimihii hore ee hay’ada PHA Maxamud Cabdinuur ayaa shaqada laga eryey kadib markii uu ku lug yeeshey musuqmaasuq baahsan oo lagu saameeyey dayactirka waddada u dhexeysa tuulooyinka Jalam iyo Xarfo.
Cabdinuur ayaa sida aan xogta ku heleyno waxay is-qabteen shirkada Is-Xilqaan oo iyadu ku guuleysatey qandaraaska dayactirka Jalam/Xarfo. Shirkadaan ayaa saameyn ku leh xafiiska Madaxweynaha Puntland.
Xafiiska Madaxweynaha Puntland saameynta uu ku leeyahay PHA
Dhinaca kale baaris warsidaha GO ku sameeyey PHA ayaa waxaa uu ku ogaadey in shaqadeeda uu si dadban iyo toos ah uu faraha ugula jiro Cabdirazaq Burgal kasoo xiligii Dowlada AHN Cadde Muuse agaasime ka ahaan jirey PHA.
Qaar ka tirsan shaqalaha hay’ada Dowlada oo la hadlay GO ayaa u sheegey in Burgal oo qaraabo dhow yihiin Madaxweyne Gaas uu la taliye aan magacawneyn uga yahay howlaha PHA isagoo sidoo kale talooyin siiya mareeyaasha hay’adaan.
Warsidaha GO oo sawiro iyo muqaal kasoo qaadey qaybo kamid ah wadada ayaa waxay ay muujinayaan godad yar yar ah iyo kuwo waaweyn ee ka muuqda bartamaha iyo dhinacyada jidkaan kuwasoo fidiya hadaan dayactir deg deg ah lagu sameyn iyadoo meelaha qaarkood ay khatar ku jiraan iney gabi ahaanba burburaan hadii la gaaro xilli roobaadka Gu’ga ee soo socda.
Sida warsidaha GO u sheegeen qaar ka tirsan shaqaalaha hay’adda PHA ayaa waxay dayactirey ku wadaa wadadaan inteeda u dhexeysa Tuulada Sheerbi iyo Waaciya kadib markii ganacsato iyo Gadiidley cabasho ugu tageen Madaxweyne Gaas.
Ganacsatadaan ayaa sida aan wararka ku heleyno ku goodiyey iney gacantooda ku dayactiri doonaan wadadaan hadii Dowladu si deg deg ah wax uga qaban taasoo khadabtey in Madaxweyne Gaas ku amro in PHA dayactir ku sameyso wadadaas.
Dhibaatooyinka haysta PHA
Xogaha aaan ka heleyno dhibaatooyinka haysta hay’adan ayaa sheegaya in qalabkii ay dayactirka ku sameyn laheyd intiisa badan muddo labo sano ah ku maqnaa gobolka Mudug iyadoo sida hadda GO fahansan yahay hadda ka shaqeysa Baneynta wado Gadiidku ka leexdo marka la dhisayo Dhismaha Wado 80KM ee dhexeysa tuulooyinka Jalam iyo Xarfo.
Shirkada Is-xilqaan ayaa iyadu ku guuleystey qandaraaska mashruuc ay midowga maalgalinayso lana soo mariyey hay’ada GIZ taasoo laga leeyahay dalka Jarmalka. Hay’adda GIZ iyo PHA ayaa mashruucaan waxay ku leeyihiin iney la socdaan sida loo fulinayo.
Qalabka PHA ayaa warar warsidaha GO helayo sheegayaan inuu ka caawino doono Is-Xilqaan marka uu dhameeyo howsha Wado leexinta. Shirkada Is-Xilqaan oo iyadu fulin waydey shuruudihii laga rabey markii ay qandaraaskaan u tartameysay iney soo dhameystirto qalabka loo baahnaa in mashruucaan lagu fuliyo.
Warsidaha GO iyo shacabka Puntland intooda jecel hurumarka ayaa waxaa ay xukuumada gaar ahaan Madaxweyne Gaas ka dalbanayaan inta ka hartey xilliga Xafiiskiisa si deg deg ah dayactir ugu sameeyaan wadadaas inteeda uu soo gaarey bur bur sababi kara iney ugu dambeynta noqoto mid wax laga qaban waayo.
Xukuumada Madaxweyne Gaas ayaa tan iyo inta ay talada haysay waxay Olole siyaasadeed kaga jirtey in xooga ay saareyso dib u dhiska kaabayaasha dhaqaale ee Puntland.